Fuudhaa Heeruma Archives - Page 2 of 4 - Ibsaa Jireenyaa
February 18, 2019 Sammubani Leave a comment
Niiti Baay’ee Fuudhuu
Islaama keessatti niiti baay’ee hanga afurii fuudhun kan hayyamameedha. Kuni gocha itti saalfatan osoo hin ta’in gocha gaarii dubartoonni itti kabajamaniidha yoo haqummaan jiraate. Akkamitti akka itti kabajaman gara boodaatti ni ilaalla. Rabbiin olta’aan ni jedha:
February 14, 2019 Sammubani Leave a comment
Namoonni lama erga mana tokko keessa waliin jiraachu jalqabanii mirgaa fi dirqamni isaan bahuu qaban ni jira. Namni osoo mirgaa fi haqa namoota biro hin dhiibin wanta fedhe hojjachuu danda’a. Ergasii bu’aa wanta hojjatee ni argata. Akkasumas, dirqamoonni inni bahuu qabu isarra ni jiru. Dirqamoota kanniin yoo hin bahin miidhaaf of saaxila. Mirgaa fi dirqamoota haqa jalatti ramaduun haqa niiti fi dhiirsi walirraa qaban ilaalaa tureerra. Har’a kutaa dhumaa, “Haqa Niitin Abbaa warraa irraa qabdu” ni ilaalla.
February 8, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti haqa abbaan manaa haadha manaa isaatirraa qabu muraasa isaanii ilaalle turre. Har’as itti fufan kannen hafan ni ilaalla.
8-Isa galateefachu, tola isaa mormuu dhiisu fi isa waliin haala gaariin jiraachu
January 31, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti cidhni karaa gammachuu fi fuudhaa heeruma itti labsan akka ta’e ilaalle turre. Yeroo cidhaa namoonni bakka adda addaatti walitti qabamuun dallaa cidhaa bareechisu. Warroonni wal fuudhanis gammachuu guddaatu guyyaa cidhaa kana itti dhagahama. Kutaa darbe keessatti badii fi dogongora yeroo cidhaa raawwataman ilaalle jira. Har’a immoo wantoota gaggaarii yeroo cidhaa raawwataman ilaalla.
January 21, 2019 Sammubani Leave a comment
Nikaah Hidhachuu- Kutaa 2ffaa
Kutaa darbe keessatti sharxiwwan (ulaagaalee) nikaah ilaalle turre. Namni nikaah hidhachuuf gara teessumaa ykn bakka sirni nikaah itti gaggeefamu deemu, sharxiwwan kanniin guutuu ykn guutuu dhabuu isaa ilaalu qaba. Yaadachisaaf sharxiwwan kunniin; dhiiraa fi dubartin wal fuudhu hedan beekkamu, isaan lamaan walitti gammaduu, waliyyiin ykn bakka bu’aan argamuu, ragaaleen argamuu fi sababoota nikaah dhoowwan irraa qulqulluu ta’uudha. Namni wantoota kanniin erga guutee booda, gara nikaah hidhachuu deema. Bakka nikaahatti wanti haasawamuu fi irratti wali galan ni jira. Wantoota irratti haasawanii fi waligalan gurguddaa fi hafuu kan hin qabne, mahrii fi iijaab-qabuul dha. Kanniin lamaan haala armaan gadiitin ni ilaalla. Mahrii irraa haa jalqabnu. In sha Allah iijaab-qabuul (Kennuu fi fudhachuu) kutaa biraa keessatti ni ilaalla.